101 မေးခွန်းများ။ စားသုံးသူ၊ နိုင်ငံရေး၊ ရယ်စရာနှင့် Starbucks Martech Zone
101 မေးခွန်းများ။ စားသုံးသူ၊ နိုင်ငံရေး၊ ရယ်စရာနှင့် Starbucks
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 16, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါဒီနေ့အားလပ်ရက် (ငါကလိုအပ်!) ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြားဘလော့ဂ်တခုမှာငါ "101" ကိုရှာဖွေသောရှေးရှေးတော်တော်များများကဖတ်ကြသည်။ ဒါကြောင့် ... ပုံမှန်အတိုင်းငါတုံ့ပြန်မှုသည်အဘယ်အရာကိုမြင်မှသီအိုရီကိုစမ်းသပ်တာပါ။ ဒီဟာတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဘယ်လောက်လွယ်ကူတယ်၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ဒီနိုင်ငံမှာငါ့ကိုရူးသွပ်စေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အံ့သြမိတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ သင်၏မေးခွန်းများကိုမေးမြန်းရန် (သို့) မှတ်ချက်များမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်၏အဖြေကိုဖြေရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Starbucks သည်ချောကလက်အရက်ဆိုင်များကိုအဘယ်ကြောင့်မပြုလုပ်သနည်း။ (ငါ့ ၁၂ နှစ်အရွယ်သမီးရဲ့စိတ်ကူး!)
အမြန်လမ်းကြောအတွက်အဘယ်ကြောင့်အများဆုံးပစ္စည်း ၁၅ လုံးကိုသင်လိုအပ်သနည်း။ အဘယ်ကြောင့်အနည်းဆုံး 15 အပြည့်အဝလှည်း? ငါပိုက်ဆံအားလုံးဖြုန်းကောင်လေးပေါ့!
ဆင်းရဲသားတစ် ဦး အားဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာဖြင့်စစ်ဆေးမှုများအတွက်ဒေါ်လာ ၃၀ ကိုဘာဖြစ်လို့အားသွင်းရန်ဘဏ်တစ်ခုအတွက်ဘာကြောင့်အဘယ်ကြောင့်အဆင်ပြေသနည်း။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အတိုးမြင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်ဘဏ်သည်ကျွန်ုပ်ချက်လက်မှတ်အတွက်ငွေကိုအဘယ်ကြောင့်ချက်ချင်းထုတ်ယူနိုင်သနည်း၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သွင်းထားသည့်ချက်လက်မှတ်ကိုသူတို့ ၅ ရက်အတွင်းထားရှိပါ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်က 2Gb SD ကဒ်ကိုရနိုင်ရင်၊ အဲဒါတွေကို ၅၀၀ ကိုအတူတကွစုစည်းပြီးမအောင်မြင်သောရွေ့လျားနေတဲ့အစိတ်အပိုင်းများနဲ့ hard drive အစား hard drive အစား 500Tb ကဒ်တစ်ခုဘယ်လိုပေးမလဲ။
အကယ်၍ ဂီတလုပ်ငန်းသည်လောဘမကြီးပါက၎င်းတို့သည်စားပွဲခုံ၊ ဘန်း၊ ဒူဘား၊
အဘယ်ကြောင့်သေဒဏ်သည်များသောအားဖြင့်တစ်သက်တစ်ကျွန်းနှင့်တစ်သက်တစ်ကျွန်းထောင်ကျခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်နှစ်ပေါင်း ၂၀ အထိဖြစ်သနည်း။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (သို့) လွတ်လပ်ရေးကြေငြာချက်တွင်မပါလျှင်လူတိုင်းက“ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ပြည်နယ်ခွဲခြင်း” ဟုအဘယ်ကြောင့်ပြောရသနည်း။
အဘယ်ကြောင့်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အဓိကပါတီ ၂ ခုသာရှိသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့မသိသောအတိုင်ပင်ခံများကိုကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်နားထောင်ကြသနည်း၊ တခါတရံ၎င်းတို့သည်ကိုယ်ပိုင်ဖောက်သည်များသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများတူညီသောပြောဆိုခြင်းကိုနားမလည်ကြသလော။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ကလေးများသည်ကောလိပ်တက်ရန် SATs များယူရန်လိုအပ်ပါက၊ နိုင်ငံရေးသမားများသည်ရုံးသို့ ၀ င်ရန်အတွက်မည်သည့်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်စရာမလိုသနည်း။
အဘယ်ကြောင့်ဆေးညွှန်းဥပဒေရေးရာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများတရားမဝင်ဖြစ်သနည်း ဆေးညွှန်း များမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးများ။
အဘယ်ကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမက်ထရစ်စနစ်သို့ပြောင်းလို့မရပါဘူး? ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီ။ များပြားစွာခွဲထုတ်ရန်လွယ်ကူသည်။
Puerto Rico သည်ပြည်နယ်မဟုတ်သော်လည်းအလက်စကာနှင့်ဟာဝိုင်ယီတို့အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
မျက်လုံး၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်သွားအတွက်အာမခံအဘယ်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားရသနည်း။ ဒီဟာကဆေးအားလုံးအတွက်မဟုတ်ဘူးလား။
ကျွန်တော်တို့စစ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်၊ ရေနံလုပ်ငန်းကဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်ရနိုင်မလဲ။ ဒီစျေးကကြီးနေတယ်မဟုတ်လား။
မည်သည့်စာလုံးကိုမဆိုသင်နားမလည်နိုင်သောထို spam ကိုမည်သူပေးပို့နေသနည်း။ သူတို့ဘာကြောင့်ပို့တာလဲ
အဖြူကော်လာရာဇ ၀ တ်သားများသည်သာမန်ရာဇ ၀ တ်သားများထက် ပို၍ ခိုးယူလျှင်မည်သို့လွယ်ကူစွာရနိုင်မည်နည်း။
ဘာကြောင့် Starbucks နဲ့ Borders မှာ Ladies Night မရှိဘူးလဲ။
အဘယ်ကြောင့်တစ်အိမ်မှတစ်အိမ် ၀ န်ဆောင်မှုများထပ်မံမရရှိသနည်း။ (ဥပမာ - drycleaning)
အဘယ်ကြောင့်လျှော်တရားမဝင်ပါသလဲ ၎င်းသည်သစ်ပင်များထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်၊ ပိုမိုအားကောင်းသည်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်ပါ။
Tommy Chong သည်အဘယ်ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှုအတွက်ထောင်ကျခဲ့သနည်း၊ သို့သော် Rush Limbaugh သည်မူးယစ်ဆေးဝါးတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲပြီးနောက်ရေဒီယိုတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်။ အော်ဟစ်ပေမယ့် Starbucks ကမှာ Grande Mocha များအတွက် $ 3.50 ပေးဆောင်။ (Mmmmmm ။ )
အဘယ်ကြောင့်သူတို့တစ် ဦး တည်းထိုင်ခုံကားများမဟုတ်သနည်း ငါလမ်းပေါ်မှာရှိသမျှသောကားထဲတွင်လူတစ် ဦး တည်းသာကြည့်ပါ။
အပို ၄၉ ဆင့်အတွက်အဘယ်ကြောင့်စူပါအရွယ်အစားကိုသင်လုပ်နိုင်သနည်း၊ သို့သော်သင်တစ်ဝက်အရွယ်အစားနှင့် ၄၉ ဆင့်ကိုမကယ်တင်နိုင်ပါ။
ဘာကြောင့်မဲပေးရမယ် ဘို့ မဲပေးလို့မရဘူး ဆန့်ကျင် တစ်စုံတစ်ယောက်?
ဘာကြောင့် Movie မှာ Grande Mocha မရနိုင်တာလဲ။
ဘာကြောင့် operating system တစ်ခုဟာရုံးအစီအစဉ်ထက်စျေးသက်သက်သာသာပါလဲ။
၎င်းတို့သည်ထည့်သွင်းထားသော hard drive နှင့် router ပါသည့်ပရင်တာကိုမတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါသလော။
အဘယ်ကြောင့်သူတို့သည် High-Definition ကို run ရန် DVDs ကိုတီထွင်ခဲ့တာလဲ
ထွက်ခွာချိန်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှလေယာဉ်လက်မှတ်ဈေးနှုန်းများသည်အဘယ်ကြောင့် ပို၍ စျေးကြီးရသနည်း။ ဘာကြောင့်မသက်သာဘူးလား။
ဘာကြောင့်ကုမ္ပဏီတွေကသူတို့ရဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေကိုအကြွေးနဲ့ချေးငွေတွေမပေးကြတာလဲ။
ဘယ်လို Yahoo!, Google၊ Microsoft၊ Monster၊ လူတွေလည်းရှိနေတယ်သို့မဟုတ်၊ Careerbuilder သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဒေါ်လာ ၁ သန်းမကမ်းပါ Payraise Calculator ကို မဟုတ်သေးဘူးလား
မှတ်ချက် - ဤစာရင်းအတွက်စိတ်ကူးသည်လာသည် Problogger နှင့်သူ၏၌ဤ post ကိုဝင်ကြ၏ စာရင်းများအတွက် Group မှရေးသားခြင်းစီမံကိန်း.
သြဂုတ် 18, 2006 မှာ 8: 26 AM
18:2006 pm တွင်သြဂုတ်လ 12, 44
ကောင်းမွန်သောစာရင်း - သင်သည်အလွန်ကောင်းသောမေးခွန်းများမေးသည်။ သင်၏ Cre8tivity အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းအချို့အတွက်၎င်းတို့ထဲမှတစ်စုံကိုငှားရမ်းပါကသင်စိတ်ထဲမှတ်မိပါမည်လား။
သြဂုတ် 21, 2006 မှာ 2: 18 AM
၁၄။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အဓိကပါတီ ၂ ခုသာအဘယ်ကြောင့်ရှိနေသနည်း။
ငါတို့မှာဆုတွေရှိတယ်လေ။ ဥရောပသားများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ရွေးကောက်ပွဲများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစနစ်များရှိကြသည်။ ၎င်းသည်ပါတီများစွာနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့များကိုထောက်ခံသည်။
၂၈။ သစ်သီးများသည်အာလူးကြော်များထက်အဘယ်ကြောင့် ပို၍ စျေးကြီးသနည်း။ သစ်ပင်များပေါ်တွင်ကြီးထွားလာသည်။
အဘယ်ကြောင့် Puerto Rico ပြည်နယ်သည်ပြည်နယ်မဟုတ်သော်လည်းအလက်စကာနှင့်ဟာဝိုင်ယီတို့ဖြစ်သနည်း။
Puerto Rico မှလူများသည်ပြည်နယ်တစ်ခုမဖြစ်ရန်မဲပေးကြသည်။
တစ် ဦး renterâ ?? s ကိုနှုတ်ယူခြင်းရှိပါသည်။
၄၅။ အယ်လ်ဂိုးသည်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏စကားပြောဆိုမှုများတွင်အဘယ်ကြောင့်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ကိုယူဆောင်လာသနည်း။
အများစုမှာ Al Gore သည်အထက်တန်းလွှာသူဌေးကြီးတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
53 သာမန်ရာဇ ၀ တ်သားများထက် ပို၍ ခိုးယူသည့်အခါအဖြူကော်လာရာဇ ၀ တ်ကောင်များသည်မည်သို့လွယ်ကူသွားသနည်း။
63. Tommy Chong သည်အဘယ်ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုဖြင့်ထောင်ကျခဲ့သနည်း၊ သို့သော် Rush Limbaugh သည်မူးယစ်ဆေးဝါးတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲပြီးနောက်ရေဒီယိုတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
Tommy Utah မှာ busted တယ်။ Utah ဟာအလွန်တင်းကျပ်တဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုက်တန်သောအချက်မှာ၊ Salt Lake သည်အမေရိကရှိနောက်ဆုံးမြို့ကြီးဖြစ်ပြီးညအချိန်တွင်လူတို့သည်တံခါးပိတ်။ မရကြပါ။
66. အဘယ်ကြောင့်သူတို့တစ် ဦး တည်းထိုင်ခုံကားများမရှိကြပါသနည်း ငါလမ်းပေါ်မှာရှိသမျှသောကားထဲတွင်လူတစ် ဦး တည်းသာကြည့်ပါ။
တစ် ဦး တည်းထိုင်ခုံကားများမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟုခေါ်ကြသည်။
70. လေ့ကျင့်ခန်းကသင့်အတွက်ကောင်းတယ်ဆိုရင်၊ ငါ့ကိုလမ်းလျှောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စက်ဘီးစီးဖို့အလုပ်သွားဖို့လမ်းမရှိဘူးလား။
နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော့်စက်ဘီးကိုစီးတယ်။ သင်စက်ဘီးစီးရန်လမ်းလျှောက်ရန် (သို့) စက်ဘီးစီးရန်သင့်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်ဆိုလျှင်အိမ်နှင့်နီးသည့်အလုပ်တစ်ခုရှာပါသို့မဟုတ်သင့်အလုပ်နေရာနှင့်နီးကပ်စွာသွားပါ။ သင်၏အဆင်ပြေမှုပတ်ပတ်လည်တွင်လမ်းဘေးနှင့်စက်ဘီးလမ်းကြောင်းများဆောက်လုပ်ရန်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားလူအားလုံး၏တာ ၀ န်မရှိပါ။
များစွာသောသူတို့သည်ဥပဒေရေးရာတာ ၀ န်ယူမှုဆိုင်ရာပြissuesနာများကြောင့်အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရသော ၀ ယ်ယူသူများအတွက်တက္ကစီငှားရမ်းသည်။
ဥပဒေကိုကျွန်ုပ်နားလည်သည်နှင့်အမျှသင်၏ကလေးများသည်ကျောင်း၌လွတ်လပ်စွာဆုတောင်းနိုင်သည်။ သို့သော်ဆရာတစ် ဦး အနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုပါ ၀ င်ရန်သို့မဟုတ်အားပေးခြင်းသည်တရားမ ၀ င်ပါ။
သြဂုတ် 21, 2006 မှာ 3: 44 AM
၁၁။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ပြည်နယ်ခွဲခြင်းကိုလူတိုင်းကဘာကြောင့်ပြောတာလဲ။ ဘယ်အချိန်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒါမှမဟုတ်လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းထဲမှာမပါလဲ။
၎င်းသည် ACLU မှအသုံးပြုသောစံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပြီး၊ လစ်ဘရယ်မီဒီယာသည်၎င်းကိုစိန်ခေါ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုမရှိပါ။
စစ်တပ်မှအသက် ၃၇ နှစ်ပြည့်သည်အထိအနားယူနိုင်သည်။
၂၂။ အသာပုတ်မှကျွန်ုပ်ရရှိသောရေသည်ကျွန်ုပ်၏နစ်မြုပ်မှုများ၊ အိမ်သာများနှင့်ရေချိုးကန်များကိုအဘယ်ကြောင့်အရောင်တောက်စေသနည်း။
သင်နှင့်ငါသည် Indianapolis တွင်နေထိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မြေအောက်ရေတွင်ထုံးကျောက်အမြောက်အများပါ ၀ င်သည်၊
အဘယ်ကြောင့်ဖြောင့်အရပ်ဘက်သမဂ္ဂများ ok ကြသည်မဟုတ်လော ကျွန်ုပ်၏ဟမ်းစတာနှင့်ပြည်တွင်းသမဂ္ဂရနိုင်မလား။ ကျွန်ုပ်၏ကျန်းမာရေးစီမံချက်တွင်သူပါဝင်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည် မယားပြိုင်ထားသူ Mormonism သည်မယား ၁၄ ယောက်စလုံးနှင့်အတူအရပ်ဖက်ဆိုင်ရာသမဂ္ဂထူထောင်နိုင်မည်လော။
Indiana ပြည်နယ်မှာကွာရှင်းပြတ်စဲမှုမှာယောက်ျားတွေဟာသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်တော့မှအပြည့်အ ၀ ချုပ်နှောင်ထားလို့မရဘူး။ မိခင်ဖြစ်သူကပြင်းထန်သောထောင်ကျခြင်းများပြုလုပ်ပြီးမှသာချုပ်နှောင်ခြင်းကိုအပြည့်အဝပေးသည်။
နိုင်ငံရေးသမားအများစုသည်သူတို့၏ရုံးခန်းမ ၀ င်ခင်သူတို့၏စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုရရှိသည်။ လူတစ်ယောက်ရုံးမှာရှိနေတုန်းချမ်းသာလာမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာမရိုးမသားပြုခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။ သင်၏မေးခွန်းဖြစ်နိုင်သည်မှာ - ဘာကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများကိုသာရုံး ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဆွဲဆောင်ကြတာလဲ။ အဖြေကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတန်းစားကလူတွေကအလုပ်အတွက် ၀ င်ငွေရပြီးအလုပ်အတွက် ၀ င်ငွေရကြတယ်။
46. ​​အကယ်၍ စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေပါကရေနံလုပ်ငန်းသည်စံချိန်တင်အမြတ်ငွေမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။ ဒီစျေးနှုန်းကြီးထွားလာသည်မဟုတ်လော
ရေနံစျေးနှုန်းကိုရောင်းလိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားကသတ်မှတ်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီများသည်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိသည်၊ စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းသည်ရှားပါးမှု၊ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုနှင့်မှောင်ခိုဈေးကွက်ရောင်းဝယ်မှုကိုဖြစ်စေသည်။
သူတို့ဟာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနိုင်တယ် ကယ်လီဖိုးနီးယားမှပြန်လည်သိမ်းဆည်းမည့်ရွေးကောက်ပွဲသည်၎င်းကိုအဆင့်သစ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်သည်။
51. Indiana ပြည်နယ်သည်မည်သည့်အချိန်ဇုံများကိုပြောင်းလဲပြီးအခြားပြည်နယ်များရှိခရိုင်အချို့ရှိသေးသနည်း။
ငါသိသလောက်ဆိုရလျှင်အင်ဒီယားနားအချိန်ဇုန်ကခုန်နေသော Hoosiers သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညံ့ဖျင်းသောရှုပ်ထွေးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဒီကိစ္စကကျွန်တော့်အတွက်အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။
ငါထင်တာကလောင်းကစားဝိုင်းဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့လမ်းကိုဖြတ်ကျော်တာဟာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့လောင်းကစားတာပဲ။ ငါကဖျော်ဖြေရေးနှင့်မဆက်စပ်သောကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းမှကွဲပြားသည်ထင်ပါတယ်။
သြဂုတ် 21, 2006 မှာ 3: 50 AM
55. ရက်စွဲတစ်ခုရရှိရန်ကျွန်ုပ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဘားသို့သွားရန်လိုအပ်သနည်း။ နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအသင်းမှာအမျိုးသမီးတစ် ဦး တစ်ယောက်တွဲတွဲထားလား။
ကြင်ဖော်မဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီမေးခွန်းကိုပဲမေးကြတယ်။ ငါရှာနေတဲ့အခက်အခဲကမင်းရှာနေတဲ့နေရာမှာမင်းလုပ်ချင်တဲ့သူလိုပဲလုပ်ဖို့နည်းနေတယ်လို့ခန့်မှန်းနေတယ်။ ခင်ဗျားဟာနယ်စပ်မှာတစ်ကိုယ်ရေအမျိုးသမီးတွေနဲ့မကြာခဏတွေ့ဆုံလေ့ရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကမင်းရှာနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေမဟုတ်ဘူး။
56. Starbucks နှင့်နယ်နမိတ်များသည်ဘာကြောင့်အမျိုးသမီးများညဥ့်အခါမရှိသနည်း။
ငါထင်ပါတယ်အမျိုးသမီးများနေ့ညအမျိုးသမီးများအတွက်အဖုံးစွဲချက်မရှိခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ Starbucks သည်သင့်အား ၀ င်ရန်မတောင်းခံသောကြောင့်၎င်းသည်မည်သို့လျှောက်ထားမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ လူတွေဟာအရက်သောက်ခြင်းကလူမှုရေးဆိုင်ရာတားဆီးနှောက်ယှက်မှုကိုလျော့နည်းစေတဲ့အတွက်ဘားတွေဆီကိုသွားကြတယ်။
57. အဘယ်ကြောင့်တစ်အိမ်မှတစ်အိမ် ၀ န်ဆောင်မှုများထပ်မံမရရှိပါသနည်း။ (ဥပမာ - ခြောက်သွေ့ခြင်း)
Indianapolis တွင်တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်ခြောက်သွေ့ခြင်းသန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုရှိသည်။ ၄ င်းတို့မှာစျေးကြီး။ အများအားဖြင့်မြောက်ဘက်ရှိအိမ်များကိုသာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောကြောင့်၎င်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုမိုများပြားလာခြင်းမရှိပါ။
ဒီအတွက်တော့အကြောင်းပြချက်များစွာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ အဓိကတစ်ခုမှာပြင်သစ်ကျောက်မီးသွေးနည်းပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင်ပြင်သစ်နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံတို့သာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်ကျောက်မီးသွေးများစွာလိုအပ်သည်။ ဂျပန်သည်သိသာထင်ရှားသည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက် Atom phobic ဖြစ်သည်။
62. လျှော်မွှေးသည်အဘယ်ကြောင့်တရားမ ၀ င်သနည်း။ ၎င်းသည်သစ်ပင်များထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်၊ ပိုမိုအားကောင်းသည်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်ပါ။
ငါစက်မှုလျှော်တရားမဝင်ခဲ့ကြောင်းမသိခဲ့ပါ ငါလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဖက်ရှင်ဖြစ်ခြင်းလျှော်အဝတ်အစားကိုမှတ်မိပုံရသည်, ငါစက်မှုဇုန်လျှော်တစ်ခုလုံးကိုတရားမဝင်အရာမြို့ပြဒဏ္isာရီထင်ပါတယ်။
64. စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်အရာဝတ္ထုများသည်အလွန်စျေးကြီးလွန်းသလော။ ငါသိပ်မပေးခဲ့ရင်ပိုပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။
65. ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအော်ငိုပေမယ့် Starbucks က Grande Mocha အတွက်ဒေါ်လာ ၃.၅၀ ပေးရတယ်။ (Mmmmmm ။ )
ငါစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ရေသောက်လေ့ရှိပါတယ်။ လူတွေကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခန့်မှန်းနေတယ်၊ ​​ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းကနေ့တိုင်းစီးဆင်းနေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုသူတို့နားမလည်ဘူး။
ဧပြီ 2, 2007 မှာ 3: 20 AM
ဇန်နဝါရီ 28, 2008 မှာ 11: 40 AM
၂၆။ Starbucks တွင်အရာရာတိုင်းကိုမရနိုင်ပါ။ (သေး)